अभिनेत्री ऋचा शर्माले लेखिन् प्रधानमन्त्रीलाई चिठी ! - Pura Samachar
यहाँ बालिकाहरुलाई समेत खुलेआम राक्षसहरुले भोग लगाउँदा, हामी कठैबरा मात्र भएका छौं। जनताको नभए पनि एकचोटि परिवारमा छोरी-नातिनीको आँखामा आँखा जुधाइ भनी हेर्नुस्। के यो देशमा उनीहरु सुरक्षित छन् र? म सरकारमा विश्वास राख्ने मान्छे, हिजोआज मेरा पैताला डगमगाउँदैछन्। बाँकी तपाईंहरू बुझ्झकी!